जवानी हुँदा सम्म ठिकै थियो, अपाङ्ग भएपछि दश बर्ष देखी एउटा कोठा बन्दी बनाएर श्रीमान बेपत्ता – Sanjal Nepal
Homeसमाचारजवानी हुँदा सम्म ठिकै थियो, अपाङ्ग भएपछि दश बर्ष देखी एउटा कोठा बन्दी बनाएर श्रीमान बेपत्ता
February 5, 2021 admin समाचार 1259
खोटागंकी सम्झना पुन । उनले २०६८ सालमा गाउँमा घाँस काट्न जाँदा रुख ढ’लेर मेरुदण्डमा लाग्यो । काठमाडौंको वि एण्ड वि अस्पतालमा उपचार गराइन् । तीन वर्ष अघि सम्म उनी हलचल गर्न पनि सक्दिनथिन् । अहिले शरिर चलाउन भने मिल्छ तर मेरुदण्ड भन्दा तलको भाग भने चल्दैन । उनी अहिले ह्वीलचेयरको माध्यममा जिवन चलाइरहेकी छन् ।
घाँस काट्न जाँदा रुखको हाँगा झरेर मेरुदण्डमा लागेको उनले बताइन् । त्यती बेला उनी १९ वर्षकी थिइन् । विवाह भएर एउटा सन्तान पनि जन्मिएको थियो । खोटागंमा त्यस्तो भएपछि उनलाई माइतीको आमाले छोरीलाई उपचारको लागि काठमाडौं लिएर आइन् । सुरुमा शिक्षण अस्पतालमा उपचार गराउँदा सम्भव नभएपछि उनलाई विएण्डवी अस्पताल पठाइयो । लामो उपचार गर्दा झण्डै २२ लाख खर्च लागेको बताइन् ।
आफुलाई त्यस्तो हुँदा श्रीमान मलेसियामा थिए । दुर्घटना हुँदा मलेसियामा भएका श्रीमान अहिले झन टाढीएका छन् । दुर्घटना भएपछि श्रीमानले चटक्कै छोडिदिए । दुर्घटना हुनुअघि सम्म राम्रै सम्बन्ध भएका श्रीमानले दुर्घटना पछि एक महिना सम्म पाँच, दश हजार रुपैया पठाउँथे त्यसपछि उनी सम्पर्क विहिन भए । अहिले ६८ साल देखि यता श्रीमानलाई देखेकी पनि छैनन् ।
शौचालय समेत जान अप्ठेरो पर्ने बेलामा श्रीमानले पनि साथ छोडिदिएपछि अहिले उनको बिचल्ली भएको छ । श्रीमानले मात्र होइन त्यो दुर्घटना पछि श्रीमानको परिवारसंग पनि सम्पर्क नभएको र कसैले सहयोग नगरेको बताएकी छन् । दुर्घटना हुँदा जन्मिसकेको थिए एक सन्तान उनले नै अलिअलि सहयोग गर्ने गरेका छन् ।
छोराको कति रहर होला, त्यो पुरा गर्न सक्दिन उनले रुँदै भनिन्, मेरो औषधि खर्चमा ठूलो रकम खर्च हुन्छ, त्यसैले श्रीमानले पनि छोडे परिवारका सदस्यले पनि हेर्दैनन् । कहिले खानै नपुग्ने अवस्था आउँदा माइतीको आमाबुवाले खानेकुरा ल्याइदिने गरेको बताइन् । त्यसरी वेवास्ता गर्ने श्रीमानले उनलाई आफुलाई नहेरे पनि छोरालाई हेरिदिन आग्रह गरिन् । मैले त केही गर्न सक्दिन, मेरो माया नलागेपछि छोरालाई हेरिदिए हुन्थ्यो, उनले भनिन् ।
विद्यालय गएकी किशोरी घर नफर्केपछि खोजी गर्दै जाँदा श’व जं”गलमा फा’लिएको अवस्थामा फे’ला
विशेष स्थानमा भेटियो ७ इन्च लामो बोतल, एक्सरे रिर्पोटपछि चिकित्सक चकित
विदेशमा श्रीमान नेपालमा अर्कै सँग श्रीमती, जब यी श्रीमानले थाहा पाए छाप्टाई दिए खुकुरीले, श्रीमतीको मृत्यु, हेर्नुहोस् भिडियो !
November 23, 2020 admin समाचार 2614
झापाको गौरादह नगरपालिका-१ मा एक महिलाको ह’त्या भएको विषयमा अनु-सन्धान गरिरहेको प्र’हरीले घ’टनामा संलग्न रहेको भन्दै उनका श्रीमान लाई प’क्राउ गरी अनुसन्धान गर्दै थियो । ती महिलाका श्रीमान लाई पु’र्पक्षका लागि जे’ल चलान समेत गरि
November 21, 2020 admin समाचार 2960
काठमाण्डौ । अनिता खडका र विनोद खडका यो जोडीलाई नचिन्ने सायदै कम होलान् । यो जोडी नेपालकै नमूना जोडीको रुपमा चिनिएको छ । टिकटकबाट भाइरल भएको यो जोडीको वास्तविकता निकै नै मा’र्मिक र आ’त्मियताले भरिएको
दुई सन्तानकी आमाले श्रीमान विदेशमा भएको बेला छोराछोरीलाई अलपत्रै पारेर अ’नैतिक सम्बन्ध भएको केटासंग भागेपछि (भिडियो सहित)
December 7, 2020 admin समाचार 3926
बुटवल । बुटवलको तिलोत्तमा ११ मा कलिला दुई नानी बाबुहरु एक्लो भएका छन् । उनीहरु आफ्नी आमाले अर्कै केटोको हात समातेर गएपछि घरमै भएरपनि अलपत्रै परेका छन् । उनीहरुका बाबु यतिबेला कतारमा छन् । बाबु
LEX 18 agenda conversation: Job club (486380)
सञ्जेललाई कुटपिट गर्ने कर्मचारी बर्खास्त, अभद्र व्यवहार मुद्दामा म्याद थप (458486)
Hello world! (384490)
A above Googler and career teach says you shouldn’t at all times flip your ardour intoaabounding-time job (351997)
dole traces grow as seasonal jobs dry up (121804)